Mercurial > l10n-central > ne-NP / file revision / mail/chrome/messenger/messenger.properties@e88add0191913802baf7c412fcb782b0e527ece1
Tue, 17 May 2022 15:51:56 +0200
changeset 1229 e88add0191913802baf7c412fcb782b0e527ece1
parent 1158 7cb5efc9b30c932ddb7ba9755cca72a5a59f4187
advanceNextPrompt=%S मा पछिल्लो नपढेका सन्देशलाई उन्नत गर्न चाहनुहुन्छ ?
# LOCALIZATION NOTES(defaultSaveMessageAsFileName): Do not translate ".eml"
# in the line below.  Also, the complete file name should 8.3
SaveMailAs=यस रूपमा सन्देश बचत गर्नुहोस्
SaveAttachment=संलग्नता बचत गर्नुहोस्
SaveAllAttachments=सबै संलग्नता बचत गर्नुहोस्
MessageLoaded=सन्देश लोड भयो...
saveAttachmentFailed=संलग्नता बचत गर्न असक्षम । कृपया तपाईँको फाइलनाम जाँच गर्नुहोस् र पछि फेरि प्रयास गर्नुहोस् ।
saveMessageFailed=सन्देश बचत गर्न असक्षम । कृपया तपाईँको फाइलनाम जाँच गर्नुहोस् र पछि फेरि प्रयास गर्नुहोस् ।
fileExists=%S पहिल्यै अवस्थित छ । तपाईँ यसलाई बदल्न चाहनुहुन्छ ?
downloadingNewsgroups=अफलाइन प्रयोगका लागि समाचारसमूह डाउनलोड गर्दैछ
downloadingMail=अफलाइन प्रयोगका लागि मेल डाउनलोड गर्दैछ
sendingUnsent=नपठाइएका सन्देशहरू पठाउँदै
folderExists=त्यो नामको फोल्डर पहिल्यै अवस्थित छ । कृपया फरक नाम प्रविष्ट गर्नुहोस् ।
folderCreationFailed=फोल्डर सिर्जना गर्न सकिन्न किनभने तपाईँले निर्दिष्ट गर्नुभएको फोल्डर नामले एउटा नचिनेको क्यारेक्टर समाविष्ट गर्छ । कृपया फरक नाम प्रविष्ट गर्नुहोस् र फेरि प्रयास गर्नुहोस् ।
compactingFolder=फोल्डर %S सङ्कुचन गर्दैछ...
confirmFolderDeletionForFilter=फोल्डर '%S' मेट्नाले यसको सम्बन्धित फिल्टरहरू अक्षम गर्नेछ । तपाईँ फोल्डर मेट्न निश्चित हुनुहुन्छ ?
alertFilterChanged=यो फोल्डरसँग सम्बन्धित फिल्टर अद्यावधिक गरिनेछ ।
filterDisabled=फोल्डर '%S' फेला पार्न सकेन, त्यसैले यो फोल्डरसँग सम्बन्धित फिल्टर अक्षम गरिनेछ । फोल्डर अवस्थित छ भन्ने रूजु गर्नुहोस्, र त्यो फिल्टर वैध गन्तब्य फोल्डरको रूपमा इङ्कित हुन्छ ।
filterFolderDeniedLocked=सन्देश फोल्डर '%S' मा फिल्टर हुन सकेन किनभने अन्य सञ्चालन प्रगतिमा छ ।
parsingFolderFailed=फोल्डर %S खोल्न असक्षम किनभने यो केही अन्य सञ्चालनद्वारा प्रयोगमा छ । कृपया समाप्त गर्न त्यो सञ्चालनका लागि प्रतिक्षा गर्नुहोस् र त्यसपछि फेरि फोल्डर चयन गर्नुहोस् ।
deletingMsgsFailed=फोल्डर %S मा सन्देशहरू मेट्न असक्षम किनभने यो अन्य केही सञ्चालनको प्रयोगमा छ । कृपया समाप्त गर्न त्यो सञ्चालनलाई प्रतिक्षा गर्नुहोस् र पछि फेरि प्रयास गर्नुहोस् ।
alertFilterCheckbox=मलाई फेरि चेतावनी नदिनुहोस् ।
compactFolderDeniedLock=फोल्डर '%S' सङ्कुचन गर्न सकिँदैन किनभने अर्को सञ्चालन प्रगतिमा छ । कृपया पछि फेरि प्रयास गर्नुहोस् ।
compactFolderWriteFailed=फोल्डर '%S' सङ्कुचन गर्न सकेन किनभने फोल्डरमा लेखाइ असफल भयो । तपाईँसँग पर्याप्त डिस्क खाली स्थान छ, र तपाईँसँग फाइल प्रणालीमा लेख्ने अधिकार छ भन्ने रूजु गर्नुहोस्, त्यसपछि फेरि प्रयास गर्नुहोस् ।
filterFolderWriteFailed=सन्देशहरू फोल्डर '%S' मा फिल्टर गर्न सकेन किनभने फोल्डरमा लेखाइ असफल भयो । तपाईँसँग पर्याप्त डिस्क खाली स्थान छ, र तपाईँसँग फाइल प्रणालीमा लेख्ने अधिकार छ भन्ने रूजु गर्नुहोस्, त्यसपछि फेरि प्रयास गर्नुहोस् ।
copyMsgWriteFailed=सन्देशहरू फोल्डर '%S' मा सार्न वा प्रतिलिपि गर्न सकेन किनभने फोल्डरमा लेखाइ असफल भयो । डिस्क खाली स्थान प्राप्त गर्न, फाइल मेनुबाट, पहिले खाली रद्दीटोकरी रोज्नुहोस्, र त्यसपछि सङ्कुचन फोल्डर रोज्नुहोस्, र पछि फेरि प्रयास गर्नुहोस् ।
cantMoveMsgWOBodyOffline=अफलाइन काम गर्दा, तपाईँ सन्देशहरू सार्न वा प्रतिलिपि गर्न सक्नुहुन्न जुन अफलाइन प्रयोगका लागि डाउनलोड गरिएका छैनन । मेल सञ्झ्यालबाट, फाइल मेनु खोल्नुहोस्, अफलाइन रोज्नुहोस्, त्यसपछि अनलाइन कार्य रोज्नुहोस्, र पछि फेरि प्रयास गर्नुहोस् ।
operationFailedFolderBusy=सञ्चालन असफल भयो किनभने एउटा अर्को सञ्चालन फोल्डरले प्रयोग गरिरहेको छ । कृपया समाप्त गर्न त्यो सञ्चालनलाई प्रतिक्षा गर्नुहोस् र पछि फेरि प्रयास गर्नुहोस् ।
folderRenameFailed=फोल्डर पुन: नामकरण गर्न सकेन । फोल्डर पुन: पद वर्णन गरिएको हुन सक्छ, वा नयाँ नाम वैध फोल्डर नाम होइन ।
verboseFolderFormat=%2$S मा %1$S
filterFolderTruncateFailed=फोल्डर '%1$S' मा सन्देश फिल्टर गरेपछि पत्रमञ्जूषा छोड्दा एउटा त्रुटि थियो । तपाईँले %2$S बन्द गर्न र INBOX.msf मेट्न आवश्यक छ ।
mailboxTooLarge=फोल्डर %S पूरा छ, र धेरै सन्देश राख्न सक्दैन । धेरै सन्देशहरूका लागि कोठा बनाउँन, कुनै पुरानो वा नचाहेको मेल मेट्नुहोस् र फोल्डर सङ्कुचन गर्नुहोस् ।
errorGettingDB=%S का लागि सारांश फाइल खोल्न असक्षम । हुन सक्छ त्यहाँ डिस्कमा एउटा त्रुटि थियो, वा पूरा मार्ग अति लामो छ ।
smtpServers-confirmServerDeletion=तपाईँ सर्भर मेट्न निश्चित हुनुहुन्छ: \_n %S?
# LOCALIZATION NOTES(serverType-nntp): Do not translate "NNTP" in the line below
serverType-nntp=समाचार सर्भर (NNTP)
# LOCALIZATION NOTES(serverType-pop3): Do not translate "POP" in the line below
serverType-pop3=POP मेल सर्भर
# LOCALIZATION NOTES(serverType-imap): Do not translate "IMAP" in the line below
serverType-imap=IMAP मेल सर्भर
serverType-none=स्थानीय मेल भण्डार
documentLoading=सन्देश लोड हुँदैछ...
twoWeeksAgo=दुई हप्ता अगाडि
untaggedMessages=ट्याग नगरिएका सन्देश
mailnews.tags.remove=सबै ट्याग हटाउनुहोस्
# LOCALIZATION NOTES(acctCentralTitleFormat): %1$S is brand, %2$S is account type, %3$S is account name
nocachedbodytitle=<TITLE>यो सन्देश हेर्न अनलाइन जानुहोस्</TITLE>\_n
confirmUnsubscribeTitle=सदस्यता हटाउन यकिन गर्नुहोस्
confirmUnsubscribeText=तपाईँ %S बाट सदस्यता हटाउन निश्चित हुनुहुन्छ ?
saveLabel=यस रूपमा बचत गर्नुहोस्...
deleteAttachments=निम्न संलग्नताहरू यो सन्देशबाट स्थायी रूपमा मेटिनेछ:\_n%S\_nयो कार्य पूर्वावस्थामा फर्काउन सकिँदैन । तपाईँ जारी राख्न चाहनुहुन्छ ?
detachAttachments=निम्न संलग्नता सफलतापूर्वक बचत गरिएको छ र अहिले यो सन्देशबाट स्थायी रूपमा मेटिनेछ:\_n%S\_nयो कार्य पूर्वावस्थामा फर्काउन सकिँदैन । तपाईँ जारी राख्न चाहनुहुन्छ ?
deleteAttachmentFailure=चयन गरिएका संलग्नता मेट्न असफल भयो ।
recipientSearchCriteria=विषय वा प्रापक समाविष्ट गर्छ:
biffNotification_message=%1$S नयाँ सन्देश छ
biffNotification_messages=%1$S नयाँ सन्देश
confirmViewDeleteMessage=तपाईँ यो दृश्य मेट्न निश्चित हुनुहुन्छ ?
confirmSavedSearchDeleteMessage=तपाईँ यो बचत गरिएका खोजी मेट्न निश्चित हुनुहुन्छ ?
passwordPrompt=%2$S मा %1$S का लागि तपाईँको पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस्:
passwordTitle=मेल सर्भर पासवर्ड आवश्यक छ
tagExists=त्यो नामको ट्याग पहिल्यै अवस्थित छ ।
editTagTitle=ट्याग सम्पादन गर्नुहोस्
editVirtualFolderPropertiesTitle=%S का लागि बचत गरिएका खोजी गुण सम्पादन गर्नुहोस्
alertNoSearchFoldersSelected=तपाईँले बचत गरिएका खोजी फोल्डरका लागि खोजी गर्न कम्तिमा एउटा फोल्डर रोज्नुपर्नेछ ।
confirmPhishingTitle=इमेल स्क्याम सावधानी
confirmPhishingUrl=%1$S ले यो सन्देश स्क्याम हो भन्ने सोच्छ । सन्देशमा लिङ्कहरूले तपाईँले हेर्नु चाहनुभएका वेब पृष्ठहरू नक्कल गर्ने पर्यास गरेको हुन सक्छ । तपाईँ %2$S हेर्न निश्चित हुनुहुन्छ ?
updatesItem_default=अद्यावधिकका लागि जाँच गर्नुहोस् ...
updatesItem_defaultFallback=अद्यावधिकका लागि जाँच गर्नुहोस् ...
updatesItem_downloading=%S डाउनलोड गर्दैछ ...
updatesItem_downloadingFallback=अद्यावधिक डाउनलोड गर्दैछ...
updatesItem_resume=%S डाउनलोडिङ पुन: निरन्तरता गर्नुहोस्...
updatesItem_resumeFallback=डाउनलोडिङ अद्यावधिक पुन: निरन्तरता गर्नुहोस्...
updatesItem_pending=डाउनलोड गरिएका अद्यावधिक अहिले लागू गर्नुहोस्...
updatesItem_pendingFallback=डाउनलोड गरिएका अद्यावधिक अहिले लागू गर्नुहोस्...
moveToFolderAgain=फेरि "%1$S" मा सार्नुहोस्
copyToFolderAgain=फेरि "%1$S" मा प्रतिलिपि बनाउनुहोस्